ဆင်တော်လို့ မြင်လိုက်တော့ အမြင်မတော် ဆင်တော်နဲ့ ခလောက် ..ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ဆက်စဉ်းစားမိ..
မပုတင် စစ်တာတွေကတော့ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ဖို့လဲဆိုတာ..
Feb 27, 2008, 5:34:00 AM
အရေးအသား ညက်ညောလိုက်တာဗျာ။ အားကျစရာပဲ။ ဇတ်လမ်းလေးကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
သကာလောင်းတဲ့ အဆိပ်စာတွေ ဖတ်နေရသလိုပဲဗျာ
I like, I respect to u.
don't give up my respectability.
I wanna encouragement always.
But sometime I feel ... .
Whatever , I really really respect to u.
Feb 27, 2008, 7:44:00 PM
မြှောက်မပြောတတ်ပါဘူးကိုစေးထူးရေ။ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ ဘဝထဲက အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို အဲဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာpostလေးတွေအဖြစ် ဖန်ဆင်းနိုင်တာ တကယ့်magicပါပဲ။
Mar 2, 2008, 7:29:00 PM